ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲ သို့ လာလည်တဲ့ သူ ငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ် အ စစအရာရာ လိုအပ်သလို C box မှာရေး ပီးထင်သလို ရေးသားမှာကြားနိင်ပါတယ် Email ကတော့thatlwinmin@gmail.com ပါ
လင်းလင်း -စတုတ္ထတော်လှန်ရေး (4th Revolution)(MP3 Audio)
လင်းလင်း ရဲ့ တေးစီးရီး သစ်(Mp3+သီချင်းစာအုပ်) ဒေါင်းယူနားဆင်နိင်ပါပြီ....
Lyric by : MG MG ZAW LATT . LYNN LYNN . NAYWAN
စာညွှန်း လက်ဆောင်မျာ3းcomments:
လှလဲ လှ ဆိုတော့.
စာညွှန်း ရင်ဘတ်ထဲက ကဗျာ No comments:
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ခါချနေရတယ် တေးစီးရီး (audio)
အဆိုတော် ၁၅ ယောက်နဲ့ တွဲဖက်သီဆိုထားပါတယ်
သီချင်းအားလုံး ၁၅ ပုဒ် ရွေးချယ်ဒေါင်းယူရန်.>>>.Download<<<
================= + ==================
၁။ ခါချနေရတယ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Snare
၂။ ငါပဲသိတဲ့အချစ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Nine One
စာညွှန်း လက်ဆောင်များ No comments:
လေးဖြူ (ဒိုင်ယာယီ) တေးစီးရီးသစ် ၁၁ ပုဒ်
ဒိုင်ယာယီ (Own Tune)
IC နဲ့ ကိုလေးဖြူ ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ် တွေ အတွက်တော့ မူးရင်းအခွေကို ဝယ်ယူ အားပေးစေချင်ပါတယ်
Online မှာလဲ ဒီလင့် လေးမှာhttp://www.myanmarmusicstore.com
ဝယ်ယူဖို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ပြီး နားထောင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ကျွန်တော် ပြန်ပြီး upload လုပ် share ပေးထားပါတယ် သီချင်းအားလုံး ၁၁ပုဒ်ပါ
စာညွှန်း လက်ဆောင်များ2comments:
OPPO ဖုန်း Firmware /Rom များကို Update/Install လုပ်နည်း လမ်းညွှန်
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်း Samaung ပြီးရင် Android Os စမတ်ဖုန်း ထဲမှာ ဒုတိယ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဟာ OPPO ဖုန်းတွေပါ..
ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် Oppo ဖုန်း သုံးသူ မြန်မာသူငယ်ချင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး
ဒီ ပို့စ် လေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...
OPPO စမတ်ဖုန်းများ ဟာ ယခင် Normal rom များနဲ့ မတူ
ယခုအခါ မှာတော့ Color Os Rom များ ကို အသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်....
((ဥပမာ --Find5စထွက် စဉ် က Normal rom ပါ၊ ယခုအခါမှာတော့ Color Os အဖြစ် အရောင်းဆိုင်များမှာရှိနေပါပြီ))
Color Os များမှာ များသောအားဖြင့် မြန်မာ(ဗမာ) ဘာသာစကား ပါဝင်လာ
စာညွှန်း MOBILE 20 comments:
android ဖုန်းမှ MR TV, MRTV4မြန်မာ လိုင်းများနှင့် ထိုင်း နံမည်ကြီး ရုပ်သံလိုင်းများကို ကြည့်ရှူ့နိုင်မည့် H TV Myanmar apk
အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် အနည်းငယ်ရရုံဖြင့် ကြည့်ရှု့နိင်မှာပါ..(ANDROID USER)
MR TV, MRTV4မြန်မာ TV လိုင်းများနှင့် ထိုင်း TV channel များဖြစ်သည့် .
channel3,7 ,5အစရှိသည့် နံမည်ကြီး လိုင်းများနဲ့ အတူ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်း ၆၀ ကျော် အား
ဖုန်းမှာ internet connection အနည်းငယ်ရရုံဖြင့် TV လိုင်းများကို
HTV Myanmar application တခုထဲဖြင့် အဆင်ပြေစွာ တိုက်ရိုတ် ကြည့်ရှူ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ...
စာညွှန်း MOBILE5comments:
OPPO R1001 colour Os အတွက် Zawgyi မြန်မာ စာပါဝင်လာသော Firmware
OPPO R1001 colour Os အတွက် Zawgyi မြန်မာ စာပါဝင်လာသော Firmware ပါ
OPPO R1001 ရဲ့ ဝယ်ယူစဉ်က ပါလာသော Language မှာ ဗမာ က
ZawGyi font မဟုတ်တဲ့ အတွက် root ဖောက် ပြီး
မြန်မာ စာသုံးရလို့ အဆင်မပြေတာ သုံးဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေသိကြမှာပါ ..
အခု update firmware မှာတော့ Language ရွေးချယ်မှု့ ဗမာ (ZawGyi) ဖြစ်တာကြောင့် 
ချစ်သူ..... မင်းနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင်...
မင်းရဲ့ ဆုံးမ တားမြစ်တဲ့ စကားသံလေးတွေကိုကြားပြီး
စာညွှန်း ရင်ဘတ်ထဲက ကဗျာ 1 comment:
OPPO (YoYo)R2001 (မြန်မာ ဘာသာစကားပါဝင်သော) Firmware/ROM
ထိုင်း မှာ နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အသုံးများတဲ့ ဖုန်းလဲဖြစ်ပါတယ်
official Rom Android 4.2.2 Jelly Bean လဲ ဖြစ်ပြီး ဘာသာစကား ရွေးချယ်မှု့မှာ မြန်မာ (zaw gyi) ပါ
ကွန်ပြူတာမလိုဘဲ ဖုန်းမှာဘဲ update လုပ် သုံးလို့ ရတာကြောင့် OPPO R2001သုံးသူတိုင်းအတွက်
ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် ကြိုက်သလိုကလိလို့ ရဘီပေါ့
size ကတော့ 610MB ရှိပါတယ်
စာညွှန်း MOBILE 19 comments:
Samaung galaxy win gt-l8552 official (မြန်မာ ဘာသာစကားပါဝင်သော ) Firmware
Samaung galaxy win gt-l8552 (Android Ver 4.1.2) အတွက် မြန်မာ(zaw gyi) ဘာသာစကားပါဝင်သော Official Firmware
စာညွှန်း MOBILE4comments:
SAMSUNG GALAXY ACE3official (myanmar language) ပါဝင်သော Firmware
SAMSUNG GALAXY ACE3GT S7270 အတွက် official myanmar language ပါဝင်သော
Firmware ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု့ Myanmar (ZawGyi) ပါ၊
စာညွှန်း MOBILE2comments:
လူငယ်နှင့် HIV အန္တရယ်
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်မိတယ်ဆိုရင် Sex နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတော့မယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတွေ သိလောက်မှာပါ။ တကယ်လည်း ကျွန်တော် Sexကိစ္စကိုရေးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ HIV ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဘာကြောင့်များပါလဲ။
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဒီလိုကိစ္စတွေကိုစရေးပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့စာရေးသူတွေဟာ ယဉ်ကျေးမူဘောင်တွေနဲ့ ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီး သားတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် သမီးတစ်ဦးဦးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိသားစုတစ်စု
စာညွှန်း ရသ No comments:
"ဘရာဇီးမှာ မေထုန်မှုပြုဖို့ ခွင့်မပြုပါဘူး။
Huawei Y511-U251 Firmware
official (Español) firmware
စမ်းသပ်ပြီး 100% ပါ
SP (Smart Phone Flash Tool)>>> Download
စာညွှန်း နည်းပညာ6comments:
ဖုန်း ထဲမှာ ပိုက်ဆံ ရှိသည့်တိုင်အောင် အင်တာနက်လိုင်း တက်မရသည့် ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း 12call , Dtac ဖုန်းလိုင်း နဲ့ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်...။
အဖြစ်များနေတဲ့ပြဿနာပါ မိမိဖုန်းမှာ ပိုက်ဆံ ရှိပေမဲ့
အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်လို့ မရဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင် ၁။APN Setting ကြောင့်လား ?
၂။ SIM Card ရဲ့  Net Data Off ဖြစ်နေလို့လား ? ဆိုပြီး ၂ ချက်ရှိပါတယ်...
အများအားဖြင့်တော့ APN (Access Point Name) Setting ပျက်သွားလို့ ဖြစ်တာများပါတယ်..
စာညွှန်း MOBILE No comments:
သင့်အီးမေး ထားခဲ့ပါ အသစ်တင်တိုင်းအီးမေးပို့ပါမည်
ဆက်လက်လည်ပတ်ရန် - ဖျော်ဖြေရေးဆိုက်များသို့
burmeseclassic မြန်မာ Movie ကိုရီးယားရုပ်ရှင်များ movies.mmblogs.net Shwedream.com Shweo.com mayhninaye.com နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်
MP3/ VCD သီချင်းဆိုက်များ
ရင်ခုန်သံ FM ညကဗျာ Myanmar All Music သီချင်းအိမ် Myanmar Music Online Myanmar MP3 Album myanmarmp3.net flashband.net
မြန်မာ Goal Soccermyanmar Magway FC Myanmar National League
Android Myanmar App2 ကျွန်တော့် ဘော်ဘော် android သမားတွေအတွက် android ဆရာကြီးများရဲ့  မြန်မာ appတွေကို တစုတဝေးထဲ ရအောင် စုဆောင်း ရှာဖေ...
ဒိုင်ယာယီ (Own Tune) IC နဲ့ ကိုလေးဖြူ ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ် တွေ အတွက်တော့ မူးရင်းအခွေကို ဝယ်ယူ အားပေးစေချင်ပါတယ် Online မှာလဲ ဒီလင့် လေး...
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်း Samaung ပြီးရင် Android Os စမတ်ဖုန်း ထဲမှာ ဒုတိယ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဟာ OPPO ဖုန်းတွေပါ.. ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင်...
android မြန်မာ application
ကျွန်တော့် ဘော်ဘော် android သမားတွေအတွက် မြန်မာ appတွေကို တစုတဝေးထဲ ရအောင် စုဆောင်း ရှာဖွေ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.....(အချိန်မရလို့ပါ မူရ...
share အဆိုတော် ၁၅ ယောက်နဲ့ တွဲဖက်သီဆိုထားပါတယ် သီချင်းအားလုံး ၁၅ ပုဒ် ရွေးချယ်ဒေါင်းယူရန်.>>>. Download <<< ...
အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် အနည်းငယ်ရရုံဖြင့် ကြည့်ရှု့နိင်မှာပါ..(ANDROID USER) MR TV, MRTV4မြန်မာ TV လိုင်းများနှင့် ထိုင်း TV chann...
ဖုန်းနံပါတ်သိရရုံနဲ့ သင့်ချစ်သူ ဘာဖုန်းကိုင် လဲ သိချင်ဘူးလား???(only Dtac operator number,Thailand)
ထိုင်းနိင်ငံအတွင်း Dtac ဖုန်းလိုင်း သုံးသူများအတွက် သာ ဖြစ်ပါတယ် အဝေးတနေရာ မှာနေတဲ့ ကိုယ့် ရဲ့ ချစ် သူ ဒါမှ မဟုတ် အပေါင်းသင...
ထိုင်း မှာ နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အသုံးများတဲ့ ဖုန်းလဲဖြစ်ပါတယ် official Rom Android 4.2.2 Jelly Bean လဲ ဖြစ်ပြီး ဘာသာစကား ရွေးချယ်မှု့...
ရာသီအလိုက် ဗေဒင် စာအုပ်
နှိ်ပ် ပြီးကြည့်ပါ ဗေဒင် ဝါသနာရှင်များ အတွက်ပါ ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးကြည့်နိင်ပါတယ်.......
OPPO R1001 colour Os အတွက် Zawgyi မြန်မာ စာပါဝင်လာသော Firmware ပါ OPPO R1001 ရဲ့ ဝယ်ယူစဉ်က ပါလာသော Language မှာ ဗမာ က ZawGyi fo...
မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ) ညီနေမင်း(နည်းပညာ) မောင်စေတနာ ... နေမင်းမောင်(နည်းပညာ) ပုသိမ်သားလေးဖြိုးဝေ ကိုဇော် .. စံပီ ဆိုက် ကိုမြတ် ဆိုက် ICT Reader မြန်မာ photoshop Z-WARE(နည်းပညာဆိုဒ်) ကိုဆန်းပွင့်သူ(နည်းပညာ) သံလုံငယ် ဓါတ်ပုံပြင်နည်းများ နည်းပညာသတင်းများဖတ်ရှုရန်.. ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) အမျိုးကောင်းသား
ရက်စွဲ အလိုက် ရွေးဖတ်ရင်
လင်းလင်း -စတုတ္ထတော်လှန်ရေး (4th Revolution)(MP3 Au...
....... .. .ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် ရှိ ကလပ်ပွဲ လိဂ် ပွဲ အစရှိတဲ့ ဘာလုံးပွဲ နှင့် အခြား အားကစားပွဲ များစွာ ကို online မှ ပေါ့ပါးစွာ တိုက်ရိုတ် ကြည့်လိုလျှင် ဒီမှာ click ပြီး .အခမဲ့ ကြည့် ရှု့ နိင်ပါသည်... .....